Tenga Pinterest Vateveri - TurboMedia.io
musha » Tenga Pinterest Vateereri
Ndeapi mabhenefiti andichaona kana ndikatenga Pinterest Vateveri?
Inounza kutendeseka uye kuzivikanwa kune yako nhoroondo
Inosimudzira kutsva & organic kukura
Inobatsira kuwedzera kubatanidzwa kwako
Haufanire kumboteedzera aya maprofessor kumashure
Orders anonunurwa mukati megumi nemakumi maviri nenomwe maawa
TurboMedia inogara ichiendesa zvakapfuura zvawakatenga
Nei ndichifanira kutenga Pinterest Vateveri?
Muteveri kuverenga pane yako nhoroondo ndechimwe chezvinhu zvekutanga izvo vashanyi kune yako nhoroondo vanotarisa. Zvinogona kuvakonzera kuti vasarudze ipapo ipapo kuti vatevere iwe kana kuona chimiro chako. Zvidzidzo zvakaratidza kuti kana uine vamwe Vateveri, Vanofarira, Maonero & Makomendi iwe uri mukana wekuwana nyowani vateveri veKutevera. Iine Pinterest inogara ichigadzirisa / ichichinja yavo algorithms iri kuramba ichiwedzera kuoma kuvaka account yako. Paunotenga Pinterest Vateveri kubva kune anozivikanwa mupi sesu inopa yako Pinterest chimiro kukwikwidza kumucheto kunoda kuonekwa uye ine shanduko yakakwira zvakanyanya yekugadzira hutachiona mhedzisiro kana kuvaka organic kukura.
Vateveri vangu vePinterest vanozonunurwa riini?
Kuchengetedza sevhisi yepamusoro uye kuendesa isu tinoongorora zvega zvega zvekutengesa. Naizvozvo, zvinogona kutora kusvika maawa makumi maviri nemana kuti odha yako itange. 24% yenguva iyo odha yako ichatanga mukati maawa mashoma kana zvishoma. Kana iwe uine hodha hombe inoenderera zuva rega rega kudzamara sevhisi yaunzwa zvizere.
Izvi zvinoisa account yangu munjodzi here?
Yedu masevhisi ari 100% akachengeteka kushandisa. Kusiyana nevazhinji vanopa rubatsiro, hatikumbire kana kuda password yemagariro yako. Naizvozvo, isu hatisi kudzora account yako kana kuiraira kuti iite chero chinhu icho chaisingafanirwe kunge ichiita. Iwo masevhisi atinopa akaedzwa kasingaverengeke nguva uye anoramba achivandudza nekuchinja pamwe nevezvenhau mafomu ekushandisa kuti uve nechokwadi chepamusoro-soro mhando uye nemhedzisiro yakanaka. TurboMedia.io inopa yepamusorosoro mhando uye inonyanya kugadziridza Social Media Kushambadzira masevhisi pamhepo.
Pinterest Vateveri vakawedzerwa kungoro yako.
100 Anofarira ($ 15) 200 Anofarira ($ 30) 500 Anofarira ($ 45) 1000 Anofarira ($ 80) 2000 Anofarira ($ 160) 5000 Anofarira ($ 300) 10000 Anofarira ($ 700) 20000 Anofarira ($ 1200) 50000 Anofarira ($ 2200)
250 Vateveri ($ 10) 500 Vateveri ($ 25) 1000 Vateveri ($ 40) 2000 Vateveri ($ 60) 5000 Vateveri ($ 110) 10000 Vateveri ($ 190) 20000 Vateveri ($ 350)
250 Vateveri ($ 15) 500 Vateveri ($ 30) 1000 Vateveri ($ 45) 2000 Vateveri ($ 65) 3000 Vateveri ($ 90) 5000 Vateveri ($ 150)